မှတ်ချက် ။ ။ လူပျို (ကြီး)၊ အပျို (ကြီး) များ မဖတ်သင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Relationships & Family » မှတ်ချက် ။ ။ လူပျို (ကြီး)၊ အပျို (ကြီး) များ မဖတ်သင့်
မှတ်ချက် ။ ။ လူပျို (ကြီး)၊ အပျို (ကြီး) များ မဖတ်သင့်
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 4, 2014 in Relationships & Family, Society & Lifestyle | 36 comments
မဖတ်သင့်ဘူး ပြောရက်နဲ့ ဖတ်လျှင်ဒေါ့ဖြင့် ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ ကိုယ့်ကံပဲနော်။ ကျော်တောင် ဖတ်မိသွားလို့ ခုလို ပြန်ရေးမိနေတာ ….
ဟိုတစ်နေ့က ဒေးလီးမေးလ် သတင်းထဲမှာ အိမ်ထောင်သည်တွေကို သုတေသန စစ်တမ်းကောက် ထားတာကို ဖော်ပြခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေါင်းဖက် နေကြတဲ့ အိမ်ထောင်သည် တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုပဲ။
အဲ့ဒီ လျှို့ဝှက်ချက် က ဘာလဲ ဆိုတော့ …..
အိပ်တဲ့အခါ အဝတ်ဗလာနဲ့ အိပ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဒဲ့ … ဟီးးဟီးး
ခညားဒို့ရော အိုက်ဒလို အိပ်လို့ အိုက်ဒလို အဆင်ပြေဂျလားငင် ….
ကျော်က လူဗျို ဆိုဒေါ့ မတိလို့ မေးကျိဒါဘာ …
ခညားဒို့ အိုက်လို အိပ်လို့ အိုက်လို အဆင်ပြေဒယ်ဆိုရင် ကျော်လည်း အိပ်ဒေါင်ကျဒဲ့အခါ အိုက်လို အိပ်မို့ (စဉ်းစားဒုန်း) ….
အိုက်ဒလို မအိပ်ဖူးသူတွေလည်း စမ်းကျိပါလားလို့ ….
စမ်းကျိပီး အဆင်ပြေဒယ်ဆိုရင် ကျော့်ကို တိတ်တိတ်လေး ပြောနိုင်ဘာဒယ်လို့ …..။
သတင်း ကတော့ ဟောဒီမှာပါဗျာ။
သုတေသန ပညာရှင် များဟာ အိမ်ထောင်သည်ပေါင်း ၁၀၀၄ တွဲကို လေ့လာ ခဲ့ရာမှာ …
ဆြာအံ အဲဒီအတိုင်း အိမ်ထောင်ပြုရင်
အောက်က မှတ်ချက်က ဘာဒုန်း
ဒီအတိုင်း ယုံမယ် မှတ်လို့ …
ပုံပြရင်တောင်မှ ချင့်ယုံရဦးမှာ ….
ဗီဒီယို ရိုက်ပြီး ပြ …
အိုက်လိုအိပ်တော့ မြန်မြန်အလုပ်ဖြစ်လို့ ဖြစ်မှာပေါ့ကွီ…
ဒီတစ်ချက်ဒေါ့ ဟုတ်လောက်ဘူး ထင်ဒယ်နော် …
ကြက်သားဟင်းတောင် နေ့ဒိုင်းချက်စားရင် ဆိုလား ဘာလား .. ကျားဖူးဒယ် ..
အင်း .. အဲ … ဟီး … ဟဲ …
ဟိုကြော်ငြာထဲကလို” သောက်လေသောက်လေ ငတ်မပြေ ပင်လယ်ဟေ့ ပင်လယ်”
အဟမ်း ငါဘာတွေပြောနေမိပါလိမ့်(CD to ဘလက်)
ဟိုနေ့က ဖတ်လိုက်ရတာ ဘာတဲ့။
မနက်သွား ညပြန် မိန်းမကို နမ်းသွားတဲ့ အမျိုးသားတွေ ရဲ့ လစာ ပို့မြင့်တယ် ဆိုလားးးး ဘာလားးးး
သမီးရီးဇားတွေရော … အိုက်လို လုပ်ယင် လစာပိုမြင့်လားငင် …
လုပ်လာဘီ..အံစာတို့ ပျောက်တုန်းကပျောက်နေပီး…ပေါ်လာတော့လည်း အ၀တ်မပါဗလာကိုယ်တီး
အိုက်လို အိပ်ရင် ပိုချစ်တယ်ဆိုဒါ ဟုတ်လား၊ ဟုတ်ဘူးလား ..
မှန်မှန်ပြောနော် .. ညာနဲ့ …
အိုက်လိုအိပ်ရင် ငါးပါးမှောက်မှာပဲကွ…ညလယ်လောက်ဆို သားတော်မောင်စုတ်ချွန်း က အိပ်ရာကူးကူးလာတယ်…ခိခိ
ကိုယ်ဒွေ့ .. ပေါ့နော် …
အဒေါ်ရဲ့တပည့်ကလေးတယောက်ပြောတာလေးပြောပြရအုံးမယ်။ ညကသားတို့အိမ်သခိုးဝင်တယ်တဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ အဘွားကသခိုးဆိုအော်တော့ ပါပါးက အခန်းထဲကပြေးထွက်လာတာ မာမားထမိန်ကြီးဝတ်လို့တဲ့ အိုက်လိုဒေါ့ထစ်တတ်တယ်လို့
မသဲကတော့ တော်တော်နောက်… နာမဖတ်သွားဘူးနော်… ကွန်မင့်သက်သက်ဝင်ရေးတာ
ညနေလာတွေ့ရင် သံခမောက် ဆောင်းလာခဲ့ဘာရန်…
အာလာလာ အဲထဲမှာ ကျော်ပါဘူးနော်
ကျော်က ဟိုလူဂျီးရေးလို့ မန့်ရုံတင်မန့်တာ
ကျော့်ကိုတာကို ဟိုလူဂျီးကို အပိုဆောင်းပေးလိုက်နော်
(ဖျား တျား သာတထားတော့ တဂျားရေ)
တဂျားနဲ့အံစာ ရောသွားသဗျား ၂ခုလုံးက cubic တွေဆိုတော့
အံမယ် အံမယ် တားမစ်နယ်ကို ဝင်လာပီး စစ်ကျေညာနေဘာလား
မဖတ်သင့် ဆိုလို့ဝင် ဖတ်သွားဂျောင်း
အင်း…အံစာကြီး ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်အိပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီထင်ပါရဲ့…။
ဟိုတလောက ပို့စ်တင်မယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကို မေးခဲ့ဘူးတာ မေ့နေပြီလား…။
ဘာတဲ့ ဦးဘလက်ကြီး အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ…တဲ့…။
အိုက်ဒီ အချစ်အကြောင်းတွေ မေးပြီး
ဘယ်နှယ့် ကိုယ်တုံးလုံး အိပ်ရာဝင်တဲ့ အကြောင်းရောက်သွားရတာလဲကွယ်…။
သားသားက ဘာမှမသိတတ်သေးလို့ ဖတ်ပဲ ဖတ်သွားကြောင်း
ဒါနဲ့ အံစာရေ လှည်းတန်း အိုင်တီဆိုင်မှာ
မင်းသံခမောက်ကို ထုချေမယ့်သူ ရောက်နေပါကြောင်းးးးး
ဒင်းက အပျောက်ကြီးပျောက်နေပြီးမှ ပေါ်လာတော့ ဒါမျိုးနဲ့။
လုံမ ရေ့။ အရီး ကိုယ်စား။
နောက်ပြီး ပုံထဲမှာ ကောင်မလေးက ရှင်မီး ကြီးဝတ်ထားတာကိုများ။
ဘာ​တွေ​ရေးထားတာလဲဗျ လိုင်းမ​ကောင်းလို့ ဘာမှမ​ပေါ်ဘူး ။
ဒါပေမယ့်… ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့… စမ်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်.. ။
ဖွေးဖွေးလေးနဲ့ ..အိမ်ထောင်များကျလို့ ကတော့……
နန်းခင်ဇေယျာ တစ်ဖက် ခင်ဝင့်ဝါ တစ်ဖက်နဲ့သာဆိုရင် ဘယ်လိုကြောရမယဲဂျာ ဗဲထီးဂွဒ်ပေါ့
အဲဒီ မူရင်း မှာ ပေးမဲ့ ကွန်မန့် တွေကို ဖတ်ချင်လို့ ဝင်ဖတ်ကြည့်တော့ ကွန်မန့် ၅၀၇ ခု ရှိပါတယ်။
Post ထက် comment တွေက ပိုပြီး ရီ ရလို့ ထိပ်ဆုံး ကွန်မန့် များ ကို ထပ်မျှပေးပါတယ်။
အနောက်တိုင်း Post က အနောက်တိုင်း စတိုင် မှတ်ချက် များပေါ့။
Speaker, Softie Land, United Kingdom,5days ago
Sleeping nude leads to sex, sex leads to happier marriage. Shocking ;)
LittleRayOfSunshine, Utopia, United Kingdom,5days ago
I don’t want him naked spooning me with his pecker poking me all night
Tim, Toronto,5days ago
“…The best way to keepamarriage happy is to sleep in the nude,astudy suggests…” I think it is probably more accurate to say you are more likely to sleep in the nude if you are happily married.
Mrs RB, North Yorkshire, United Kingdom,5days ago
The secret to my happy marriage? Separate beds !!! My husband has more hair thanadulux dog and he moults too – I’m not sleeping naked next to THAT lol
dailyrubbish, New York, United States,4days ago
Hardlyasurprise the author ofadailymail article doesn’t understand whatacorrelation is. Of course the study doesn’t suggest that whatsoever.
Welsh Betty, Cardiff, United Kingdom,5days ago
Hubby and I clock up almost 34 years together and both wear night clothes. Just be comfortable that’s what matters. Oh and stop taking notice of stupid surveys. I wish these ‘the secret toahappy marriage’ things would just stop. There is no secret because 1) we are all different 2) what works with one couple may not work with another 3) all these ‘secrets toahappy marriage’ articles may end up making newly weds or even long term couples, and especially insecure couples feel like they are inadequate or aren’t doing something they should be doing, which could putastrain on their relationship. Grrrrrr
Sarah Malcolm, Aberdeen, United Kingdom,5days ago
Erm… I don’t think sleeping naked will “fix” your unhappy relationship… I think the poll shows that happy couples are more likely to sleep naked together than unhappy couples, not that sleeping naked createsahappy relationship
FrannyAdams, Surrey, United Kingdom,5days ago
The secret of marriage? getaspare room, or bunk beds! the bottom double bunk bed with the single one of top. Apart from the obvious bedtime shenanigans, I absolutely love sleeping alone. I cannot bear not being able to sleep star fish style in the middle ofabed. Use the bed for ‘action’, then im off into the spare room. Is that weird???
Budgie, Norwich, United Kingdom,5days ago
I have just discovered that 50 per cent of people who eat porridge for breakfast are not happy; 50 per cent who eatafry-up are happy. In my survey two people were asked. See, I can come out withaload of rubbish, too.
Oli, Englishland,5days ago
My lady and I have been together4years and i’ve always worn shorts and she’s always worn pjs . We couldn’t be happier together. Even when I get the bed to myself, I still wear shorts. I just find it more comfortable. I don’t think it has any bearing on the relationship. Besides, my thinking is that in the event ofahousefire, I’d prefer to find myself standing on the street outside my house in shorts rather than in the nip.
lana, london,5days ago
I`ve never heard such rubbish. What idiot comes up with this stuff ??
.ကိုယ့်ပစ္စည်းလေးတွေ မှန်အောင်ဝတ်ပြီးမှထွက်ဖို့ ကျင့်ထားနော…
ရှေးမြန်မာတွေ.. ယောကျားကအပေါ်အကျီ င်္မပါ… ပုဆိုး..။
သိပ်မထူးပါဘူး..။ ပူအိုက်လို့..ဟိုလှိမ့်ဒီလှိမ့်နဲ့.. ကျွတ်မှာပဲ..။
အပူပိုင်းနိုင်ငံတွေ.. နွေရာသီမှာ.. အကျီ င်္မပါပဲအိပ်ရင်.. ချွေးကထွက်ရင်စုတ်မယ့်အ၀တ်မရှိသမို့.. ပိုထွက်တယ်..။
အန်ဇာ ရေ မင်း နဲ့ အခု ဒီ ကိစ္စ မင်းနဲ့ မဆွေးနွေး သေးဘူး
မင်း မာကလာ ဆောင်ပြီး တစ်ပါတ်အကြာမှာဒူး တိုက်ဆွေးနွေးမယ်
ခုလို မန့်ပေးတွားဂျတာ ကျေးဇူးဘာ ..
အချိန်မှီ ရီပလိုင်း မလုပ်နိုင်တာ ခွေးလွှတ်ပါ …
ဒါမယ့် .. အကောင် သေးသေးတော့ လွှတ်ပေးပါ …
သန်းကျူးဗဲဒီးမက်ခ်ျ